China Crystal diamond iglasi ngaphaya isibane mveliso kunye nabenzi | Iglasi yaseHonghui
Ubungakanani beSmart, obulungele iindawo ezahlukeneyo, zombini zokuhombisa kunye nokusebenza.
Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu weglasi, kwaye imveliso iqinile kwaye igudile.
Ubume obusikiweyo bejiyometri benza ukuba izinto zeglasi zibonakale ngokungaphezulu, njenge-static yedayimani esikiweyo yomphezulu, itofa ukukhanya okunxilisayo kunye nesithunzi ebomini.
Ubume obusikiweyo obunemilinganiselo emithathu busisityebi kunxibelelwano kwaye buhle ngembonakalo.
✔✔✔ [uhombiso olugqibeleleyo lwasekhaya kunye nezipho]: Abaphathi beekhandlela bakulungele ukongeza uzuko nothando kwitafile yokutyela. Igumbi lokulala, itafile yasekhitshini kunye negumbi lokuhlala elinokuhonjiswa kwitafile yekofu, umhombiso ofanelekileyo weKrisimesi, Umbulelo kunye nayiphi na imihombiso yetafile yomnyhadala.
✔✔✔ [Isipho esihle nesinoveli sokuthweswa izidanga] imihla yokuzalwa, isikhumbuzo, umbulelo, isipho soSuku lweValentine, isipho sosuku lukaMama, isipho sikaTata, ezothando kunye nothando, uCyber ​​ngoMvulo kunye noLwesihlanu oMnyama kunye nezihlandlo ezikhethekileyo Beka iti (ayinikezelwanga) kwisitya ngasinye kwaye iya kukhupha ukukhanya okuvuthayo kunye nokwenza imeko egudileyo ekhulula uxinzelelo kunye nokuphucula ukulala
✔✔✔ [IMVELISO]: iimveliso zenziwe ngezinto ezisemgangathweni ezisetyenzisiweyo kunye nenkcitho encinci kuwo onke amanqanaba emveliso. Ngenjongo yokufezekisa i-carbon carbon footprint, nceda uphinde uphinde uncede uMama uMhlaba ulunge ngakumbi kwizizukulwana ezizayo.
✔✔✔ [Ukhuseleko] Qaphela: Phambi kokugcwalisa ifreyim yeglasi ngamakhandlela amatsha, nceda ucoce kakuhle ukuze kungabikho ntsalela intsalela kunye / okanye umsonto kumakhandlela angaphambili, nto leyo ebangela ukhuseleko-soloko ugcina izilwanyana zasekhaya Kwaye zingatshi izixhobo.
Uyilo lwesitayile seMinimalist senza ubomi buhle ngakumbi, bukhaphukhaphu kunye nomgangatho olungileyo, uyilwe ngesinyithi ngokusikwa okuntsonkothileyo, Yenza umboniso wokukhanya nokukhanya.
Uyilo olulula lwala maxesha kuye nakuphi na ukuhonjiswa, olukhulu igumbi lokuhlala, indawo yokutyela, indawo yokuhlala, igumbi lokuhlambela, kunye nokuhonjiswa kwegumbi lokulala.
✿ Yongeza ukukhanya kweKhandlela -Iphatheni entle ephethe ikhandlela elikhanyayo, liphethe ikhandlela letiyi ye-wax okanye ikhandlela ezingenamlilo. Ukufezekisa ukukhanya kwezibane kwigumbi lokulala okanye kwigumbi lokuhlala, ikwongeza ngokona kulungileyo kwimpahla yezehlo.
Egqithileyo Amanzi agudileyo ombane weglasi yesibane
Okulandelayo: Iglasi yegolide ebonakalayo yeliphatho lesibane
Ezinkulu Glass ikhandlela ezityeni
Iglasi yegolide ebonakalayo yeliphatho lesibane
Isibane esibomvu esibomvu esibonakalayo esibonakalayo
Isibane sesibane seglasi ebomvu
Isiphatho sesibane esisicaba esineflethi ...
480g iglasi ikhandlela ikomityi ecacileyo